चिनिया राष्ट्रपती नेपाल भ्रमणमा आउछु भन्दा ओलीको किन दुख्यो टाउको ? कारण यस्तो छ | rochak nepali khabarside
चिनिया राष्ट्रपती नेपाल भ्रमणमा आउछु भन्दा ओलीको किन दुख्यो टाउको ? कारण यस्तो छ
काठमाडौं २३ पूस । कुनै भवितव्य नभए अनि राजनीति संलदै गए सन् २०१६ को मार्च वा अप्रिलमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको एक या दुई दिने भ्रमण गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रपति सी जिनपीङको सम्भावित नेपाल भ्रमणका लागि चिनियाँ पक्षले तयारी र पहल समेत सुरु गरिसकेको छ । तर, नेपालको कुटनीतिक पहल भने शून्य प्राय छ ।
यही बिचमा चीनका लागि नेपाली राजदुत डा.महेश मास्केको पदावधि समाप्त हुन लागेको छ । चीनसँग राम्रो सम्पर्क सुत्र कायम गरेका मास्केको पदावधी थप्ने पक्षमा सरकार देखिदैन । तर, उनको अभावमा बेइजिङमा नेपालले गर्नुपर्ने पहल गर्न सक्ने छैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउने विषयले यतिवेला नेपालको मात्र होइन, दक्षिण एसियामै चासोको विषय बनेको छ । उनको सम्भावित नेपाल भ्रमणलाई लिएर सबैभन्दा बढी भारत नै हच्किएको छ ।
उनको भ्रमण प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणपछि हुने बताइएपनि मितिका बारेमा कसैले पनि खुलाएको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको यो भ्रमण नेपालका लागि मात्र होइन, चीनका लागि पनि निकै महत्वपूर्ण र नयाँ आयाम हुने छ र यो भ्रमण दक्षिण एसिया हुँदै मध्य एसियासम्म चीनको पहँच बढाउनका लागि फलदायी हुनेछ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा पनि चिनियाँ योगदान बढ्ने गरि यो भ्रमण हुनेछ । उनी विश्वकै शक्तिशाली शासक मध्ये एक हुन् र उनी विश्वकै केन्द्रमा रहेका नेता हुन् । यस्तो अवस्थामा उनले नेपाल भ्रमणका लागि केही सर्तहरु तयारी गरेका छन् ।
उनको सम्भावित भ्रमणमा इन्धन पाइपलाईन निर्माण र त्यसको सम्पूर्ण लगानी चीनले नै गर्नेगरी सम्झौता गर्ने, मध्य एसियालाई केन्द्र बनाएर निर्माण गरिने रेलमार्गको हस्ताक्षर गरिने र नेपालमा चिनियाँ लगानी ल्याएर उर्जा विकास गर्ने विषयमा हस्ताक्षर गर्न चीन तयार छ ।तर, यसका लागि उसले केही सर्त राख्नेछ । त्यो प्रधानमन्त्री ओलीकालाई अत्यासलाग्दो र असम्भव हुने छ ।
चीनले यी सम्झौता अघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग बेइजिङमा इन्धनको व्यापारिक सम्झौता र विप्पा सम्झौता गर्ने छ । र शीको भ्रमणमा हुने सम्भावित सम्झौताका लागि राजनीतिक सहमति कायम गर्नका लागि ओलीलाई आग्रह गर्ने र राजनीतिक सहमति बनेमा मात्र उनको भ्रमण हुने छ ।
नत्र, उपराष्ट्रपतिको मात्र भ्रमण हुनेछ । नेपालसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले केही प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने उसको सर्त रहने छ । चीनसँगको सम्बन्ध दिल्लीलाई देखाउन या उसँग बार्गेनिङ पावर बढाउनका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने रणनीतिको अन्त्य गर्नका लागि पीङले प्रतिवद्धता माग्ने भएका हुन् ।
उनले चीनसँगको सम्बन्ध र मामला भारतसँगको फाइदाका लागि उपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता नआए यस्तो सम्झौता नगर्ने संकेत गरिसकेका छन् । किनकी चीनको भारतमा अत्याधिक लगानी छ र भारतलाई विच्क्याएर नेपालसँग नजिक हुनु उसका लागि बेफाइदा हुनेछ ।
यसकारण चिनियाँ सर्त मान्नका लागि नेपाली नेतृत्व तयार हुनुपर्नेछ । अहिले पनि नेपाली नेतृत्वले ढुलमुले नीति लिएका कारण इन्धनको व्यापारिक सम्झौता हुन नसकेको चिनियाँ आरोप छ । देखिन पनि यस्तै देखिएको छ ।यसकारण पीङको प्रस्ताव ओलीका लागि आपत हुन सक्छ, तर, यसले दीर्घकालमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्नेछ । नेपाल शन्देसबाट
Admin24:16:00 PM